Izindaba - UMingshuo Electric uphase isitifiketi se-TUV futhi wathola isitifiketi somkhiqizo wegolide kanye nesitifiketi samandla
Ngo-2017, iMingshuo state solid solid high welding machine ithole isitifiketi se-Russian GOST - R ngenxa yezidingo zezitifiketi zomshini wokushisela wamakhasimende; Ngo-2020, iMingshuo Group inqobe ilungelo lobunikazi lobuchwepheshe kumshini wokushisela, kanti abanye abazali abaningana mayelana ne-welder bayacelwa.
I-Baoding Mingshuo Electric idlulise isitifiketi se-TUV okokuqala ngqa ngo-2019 futhi yathola lesi sitifiketi futhi ngo-2020. Ukuqinisekiswa ikakhulukazi kufaka isitifiketi sokukhiqiza, isitifiketi esifakiwe kanye nokuqinisekiswa kwamandla wezomnotho. ifektri ngumzimba wesitifiketi ovela eceleni.Amakhasimende angafunda ngefektri iMingshuo ngqo kusuka kwividiyo egcwele ifektri eku-inthanethi, ukuze uvakashele ifektri yethu ngaphandle kokuphuma, futhi wonge isikhathi esiningi namandla kumakhasimende.Yiqiniso, iMingshuo Electric ihlale ikhona ilungele amakhasimende amasha namadala ukuvakashela imboni yethu nganoma yisiphi isikhathi futhi afunde inqubo yokukhiqiza yemishini yokushisela.
Ngenxa yokwanda okuqhubekayo kwebhizinisi, iMingshuo Group yakha indawo yokusebenzela entsha ngo-2016. Ngemuva konyaka, bonke abasebenzi nemishini yeBaoding Mingshuo bathuthela esizeni esisha, nendawo entsha yezitshalo yanda kathathu, indawo yehhovisi yanda ngakunye isikhathi. Isibalo sabasebenzi senyuke kane. Ngalesi sikhathi, uMingshuo ulwela njalo ukuhlinzeka ngemishini nezinsizakalo ezintsha kumakhasimende amasha namadala. Ngemizamo engapheli, isabelo sezimakethe zasekhaya nakwamanye amazwe sikaMingshuo besilokhu sikhula. besimenyiwe ukuthi sihlanganyele kwinhlangano yepayipi lensimbi yasekhaya futhi sibe yilungu lenhlangano. Ngokuxhumana nokubambisana, sifunde izinguquko ezintsha embonini, saqonda izidingo zamakhasimende ngokushesha phambilini, futhi sakhonza amakhasimende kangcono. Eminyakeni eyalandela, saya ePakistan, e-Iran, eTurkey, eJalimane, eBrazil, eThailand nakwamanye amazwe ukuze sihlanganyele kulo mbukiso, futhi sinezithunywa zethu eNdiya.